Yorkipoo Wax Walboo Aad Ka Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Eyga Yorkie-Poo - Taranka
Yorkipoo Wax Walboo Aad Ka Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Eyga Yorkie-Poo
The Yorkipoo, isku dhafka u dhexeeya Yorkshire Terrier iyo Poodle, waa qashin yar oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah.
Isku-darka noocan ah wuxuu leeyahay shakhsiyad jacayl leh iyo rabitaan joogto ah oo ah inuu noqdo udub dhexaadka dareenka.
Iyagoo ku caanbaxay ciyaar iyo naxariis labadaba, waxay ciyaar aad u wanaagsan ka dhigayaan qoysaska iyo milkiilayaasha markii ugu horreysay.
Mararka qaarkood, eeyahaani waxay noqon karaan hypoallergenic taas oo iyaduna ka dhigaysa ciyaar weyn oo loogu talagalay dadka xasaasiyadda qaba.
Yar, jilicsan oo macaan, Yorkie-Poo ayaa ah nooca loo yaqaan 'crossbreed' ee loogu talagalay kuwa ka dambeeya xayawaanka macaan iyo xiisaha leh.
Yorkipoo ma noqon karaa eeyga adiga, sii wad akhriska si aad u ogaato.
Waa Maxay Yorkipoo?
Aqoonsiga Naadiga Kennel
La jaanqaadida Qoysaska
Cabirka & Muuqaalka Yorkipoo
Tilmaamaha Daryeelka Eyga ee Yorkipoo
Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in kaniinigan markii ugu horreysay lagu kariyay Ameerika.
Yorkipoo waa iskutallaab u dhexeysa Terry Yorkshire Terrier iyo Guntin Guntin.
Nooc cusub oo isweydaarsi cusub, waxay u badan tahay in noocani isweydaarsiga ah markii ugu horreysay la soo saaray intii lagu jiray wajiga 'doodle' ee 1980s iyo 90s .
Bixiyeyaashu waxay markii ugu horreysay fureen Yorkie-Poo iyagoo isku dayaya inay yeeshaan Terry Yorkshire oo leh jaakad hypoallergenic ah.
Ninkan yari wuxuu sameeyaa eey wehel fiican leh.
Wuxuu sifiican ugu habboon yahay qaab nololeedka oo dhan, laakiin wuxuu ku kobcay jawiga magaalada, cabirkiisa is haysta wuxuu ka dhigayaa inuu ku noolaado guri weyn.
Tan ayaa la sheegay, wuxuu ku fiicnaan karaa meelaha waaweyn ee furan sidoo kale beertiisa!
Wax yar baa laga ogyahay asalka dhabta ah ee eyga Yorkipoo, si kastaba ha noqotee taariikhda labada waalid waalid si aad ah baa loo yaqaan.
Yorkshire Terriers ayaa markii ugu horaysay lagu arkay gudaha qarnigii 19aad ee miinooyinka Yorkshire .
Ujeedadoodu waxay ahayd inay soo qabtaan jiirka iyo wixii kale ee miinada ku jira.
Mararka qaarkood, kaniinigan ayaa loo adeegsan jiray ugaarsiga calaamadaha iyo dawacooyinka sidoo kale, iyaga oo ka dhigaya kuwo qallafsan oo cadho badan!
Sanadihii la soo dhaafay, Yorkshire Terrier waxaa badanaa loo isticmaali jiray eey wehel ah.
Poodles sida ey eey yihiin wax yar ka weyn oo ku saabsan qarnigii 15aad .
Magacoodu wuxuu ka yimid Jarmalka erayga 'Pudel', oo macnaheedu yahay buufin.
Asal ahaan doorkan noocani wuxuu ahaa inuu u shaqeeyo sidii eey qori ah, oo si geesinimo leh ugu soo qaadaya ciyaar milkiilahooda.
Hadda, foorarkan waxaa loo arkaa inuu yahay eey wehel u ah kuwa hodanka ah iyo kuwa hodanka ah, iyo xitaa mararka qaarkood eeyaha adeega.
Maaddaama ay yihiin isku dhaf, ma aqoonsana Naadiga Xannaannada Mareykanka.
In kasta oo aysan aqoonsan naadi naadi oo weyn, waxay leeyihiin koox iyaga u gaar ah taasi waxay u dabaaldegtaa dhammaan waxyaalaha Yorkipoo!
In kasta oo aysan jirin shabakad samatabbixin gurmad ah oo loogu talagalay Yorkie-Poo, badiyaa iskudhafyadan waxaa loo iibsadaa wejiyadooda qurxoon ka dibna waa laga tagaa markii aysan sii ahaaneyn eey.
Sidaa awgeed, waxaa suuragal ah in mid ka mid ah eeyahaas laga korsado si toos ah hoygaaga deegaanka.
Jadwalka Xaqiiqda Yorkipoo
Cabir 12 illaa 15 inji
Miisaanka Ilaa 10 rodol
Ku Haboon Qof walba
Midab Madow, Tan, Casaan, bunni, kareem iyo qalin
Dabeecad Daacadnimo, Saaxiibtinimo, Xasilooni, Difaac iyo Cod dheer
Kale Yorkie Poo, Yorkidoodle, Yorkapoo, Yorkiepoopoo
Sida labadooda waalidba, Yorkipoos waa xariifnimo waxayna si fudud u baran karaan adeecida aasaasiga ah.
Korsiyaasha suurtagalka ah waa inay udiyaar garoobaan inay keydiyaan saaxiibkood mustaqbalka dhow.
Qiimaha Yorkipoo wuxuu u dhexeyn karaa meel kasta oo u dhexeysa $ 800 illaa $ 20,000 USD.
Markaad qaadanaysid Yorkie-Poo ka yimid breed sumcad leh , badankood waxay filan doonaan dhowr boqol oo doollar oo lagu keydiyo mid ka mid ah eydooda.
Sidaa awgeed, ka-fekerka hore iyo qorsheynta waa lama huraan.
Si kastaba ha noqotee, la soco qiimaha dhibcaha sare ee ay sameynayaan iyaga oo ah kuwa loogu jecel yahay mashiinnada eyda .
Markaad raadineyso inaad iibsato eey, hubi inaad qaaddo talaabooyin si aad u hubiso inaad la shaqeyneyso abuure mas'uul ah.
Maaha wax aan caadi ahayn in laga helo eeyahaas meesha ugu sarreysa fasalka adeeciddooda.
In kasta oo loo tixgelinayo inuu yahay eey yar, haddana si buuxda uma cadda haddii Yorkipoo ka ogyahay tan.
Eeyadan ayaa sameeya eeyo waardiye ah oo aad u fiican, iyaga oo u ciyo kuwa ay u arkaan in ay khatar ku yihiin. Si kastaba ha noqotee, badanaa inta badan maahan 'hanjabaadaha' ma aha wax ka badan bisadaha ama gawaarida dabku ka kaco!
Wadista ugaadhsiga ee Yorkipoo waxay si weyn ugu xirnaan doontaa haddii khadka dhiigoodu ka sii badan yahay Yorkshire Terrier ama Poodle.
Kuwa leh shakhsiyaad badan oo Poodle ah ayaa noqon doona kuwa jilicsan, halka kuwa xiriir la leh Yorkshire Terrier ay ku raaxeysan doonaan cayrsiga.
Eeyahaani waa kuwa ugu farxadda badan marka dhabarka mulkiilahooda , oo aadan si fiican u sameynin muddooyinka dheer ee kala maqnaanshaha.
Tababbarka kala-goynta hore wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh, eygaaga oo kaligiis kali ahaada daqiiqado yar markiiba isla markaana si weyn abaal marin ugu celiya markay soo laabato waxay aadi doontaa wadada dheer ee nolosha dambe.
Isku darkaaga Yorkie Poodle wuxuu ka dhaxli karaa jacayl ciyo waalidkood Yorkshire Terrier, taasoo keentay eey jecel sheekaysiga!
Nolol iyo adkaysi leh, isku-darkaani wuxuu caan ku yahay sameynta joogitaankooda si caan ah!
Isku-darka noolahaani waa nolosha iyo nafta xisbi kasta.
Yorkipoo wuxuu ku kobcayaa dareenka aadanaha, oo aan wax kale ka jeclayn dareenka milkiilahooda iyo xoqid wanaagsan dhagaha gadaashiisa.
Yorkie-Poos waxay ku fiicantahay guryaha halkaas oo uu jiro qof siiya iyaga buuqa ay jecelyihiin.
Lagu yaqaanay inuu yahay nooc kaamil ah nolosha qoyska.
Si ka duwan waalidkood Yorkshire Terrier, waxay ku raaxaystaan ​​ciyaar waxayna jecel yihiin inay la joogaan kuwa leh tamar dhalinyaro.
Si kastaba ha noqotee, marka cayaartoodu dhammaato, way ku faraxsan yihiin inay ku foorarsadaan sariirta oo ay daawadaan TV-ga.
Maskaxda ku hay, Yorkipoo waa nooc yar waxaana loo tixgeliyaa inuu xoogaa jilicsan yahay.
Ciyaarta qallafsan looma dulqaadan doono oo carruurta waa in marwalba lala socdaa marka ay eyga la ciyaarayaan.
Tan waxaa loogu talagalay badbaadada eyga iyo cunugga labadaba, Yorkipoos waxaa lagu yaqaanay inay si khafiif ah ugu dagaallamaan carruurta sida daran u ciyaareysa.
Isdhexgal wanaagsan, bakooradani waxay la qabsan kartaa xayawaanka kale ee qoyska sidoo kale, si kastaba ha noqotee, waxay doorbidaan inay noqdaan xayawaanka kaliya ee guriga ku jira.
In kasta oo aan si rasmi ah loogu aqoonsan inay yihiin eey yar (maxaa yeelay xaaladdooda isku dhex jirta darteed) eeygan ayaa ah nooc yar.
Miisaankiisu waa toban rodol oo taagan inta u dhexeysa 12 iyo 15-inji, Yorkipoo wuxuu ku habboon yahay dhabtaada.
Sida dhammaan noocyada isweydaarsiga , Yorkipoo wuxuu ku duwanaan karaa muuqaal duurjoog ah.
Eeyooyinka qaarkood waa isku dhafan yihiin, halka kuwa kale ay u muuqdaan kuwo u eg waalid waalid ka kale.
Guud ahaan, isku darka Yorkie Poodle waxaa lagu arki karaa jaakado qafiif ah, jidh yaryar iyo wajiyo muujiya.
Waxay leeyihiin dhisme caato ah, jilicsan in kasta oo shakhsiyaadkoodu xoogan yihiin.
Eyga Yorkipoo wuxuu ku imaan karaa midabbo kala duwan: qalin, kareem, bunni, casaan, madow iyo midab. Habka ugu fudud ee lagu qiyaasi karo midabka eeygaagu noqon doono ayaa ah in la fiiriyo jaakadaha waalidka ama dhagaha.
Sababtoo ah kala duwanaanta midabka jaakad xitaa eey yaryar oo isku qashin ah ayaa noqon doona midabbo kala duwan.
Yorkie-Poo waxay lahaan doontaa jaakad adag oo adag (sida Terrier) ama jaakadda jilicsan ee Poodle .
Mid ka mid ah ujeeddooyinka asalka ah ee ka dambeeya taranka iskudhafkan ayaa ahaa inuu yeesho jaakad hypoallergenic ah.
Tani waxay run ku noqon kartaa qaar ka mid ah eeyaha Yorkipoo, laakiin dhammaantood ma wada dhaxlaan jaakadda dandada yar ee Poodle.
Haddii xiisaha aad u leedahay tarankaani ka yimaado xiisaha loo qabo jaakad loo yaqaan 'hypoallergenic', hubi inaad waqti badan la qaadatid eygaaga dhogorta badan ka hor intaadan korsan si aad u hubiso in jaakadoodu ay adiga kugu habboon tahay.
Inta ka sii dhumucda dharkaaga maqaarkaaga, ayaa badanaa waxay u baahan doontaa cadayasho.
Noocani wuxuu u baahan yahay cadayasho maalin kasta.
Haddii aad korsato eey leh jaakad ka gaaban, waxaa laga yaabaa inay suurtagal tahay in aad iska soo duubto Yorkipoo-gaaga . Haddii aad doorato inaad tan sameyso, waxay u baahan doonaan jaris lixdii ilaa sideedii toddobaadba mar.
Milkiilayaashu waa inay hubiyaan inay si taxaddar leh uga saaraan timaha hareeraha indhaha iyo afka sidoo kale.
Isku darka Yorkie Poodle wuxuu u muuqdaa inuu yahay eey nadiif ah, sidaa darteedna lagama maarmaan ma aha in si aad ah loo maydho.
Halkii maydho dhawrkii biloodba mar noqon doonaa ku filan. Markaad maydhanaysid, waa inaad waqtigan u isticmaashaa inaad ka hubiso dhegaha saxaradaada dhego-furan ama calaamadaha cudurka.
Noocani wuxuu ubaahanyahay inta udhaxeysa 20 ilaa 30 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta.
Yorkipoo ku caan ah la qabsi heer sare ah, meel walbaba wuu ku noolaan karaa.
Haddii ay helaan feejignaan ku filan iyo jimicsi, noocani wuxuu ku faraxsan yahay laga bilaabo xaafadaha ilaa bartamaha magaalada, iyagoo qaadanaya wax kasta oo ay ku socdaan.
Hagaha 400 kalori
Eyga Yorkipoo wuxuu u baahan doonaa 1 koob oo kibble tayo sare leh maalin kasta.
Milkiilayaashu waa inay iibsadaan cunto qalalan oo loogu talagalay eeyaha yar yar maadaama Kibble u egtahay inuu yaryahay cabirkiisa.
Hilibku waa inuu ku jiraa seddexda ugu saraysa ee Kibble waana inuu ahaadaa qaab saafi ah.
Meesha ay suurta gal tahay, iska indho tir wixii cunno qalalan oo ay ku jiraan hilib tayo liita (sida cuntada) ama lafaha dhulka.
Eeyaha yaryar sida Yorkie-Poo ayaa u baahan 18% borotiin, 5% dufan iyo 50% karbohaydrayt oo ku jira cuntadooda .
Si aad ugu darto noocyo badan ee eygaaga, iskuday inaad quudiso eeyga khudradda iyo miraha badbaadsan sida qaraha ama cananaaska .
Maaha nooca ugu firfircoon, isku celcelis, a Yorkipoo wuxuu u baahan doonaa inta u dhaxeysa 20 ilaa 30 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta.
Sida noocyada oo dhan waxay u helaan zoomies marwalba iyo mar kale, laakiin noocani ma laha ciyaaraha fudud ee noocyada kale ee shaqeeya .
Cabbirkan yar ee foosha ayaa macnaheedu yahay in badanaa ciyaar wanaagsan oo ku taal baarkinka maxalliga ah eeyaha kale qaar ka mid ah ay noqon doonto jimicsi ku filan maalinta.
Eeyadan caqliga badan waxay sidoo kale u baahan yihiin kicinta maskaxda oo ay weheliso jimicsigooda jir ahaaneed.
Yorkshire Terriers waxaa loo soosaaray inay yihiin jileecyaal sidaas darteedna sifiican ayey uga jawaab celiyaan kubadaha carafta leh iyo ciyaaro kale oo udgoon ku saleysan, sida dhuumasho iyo raadis.
Sida labadaba waalidkood, Yorkipoo waa eey xariif ah oo si fudud u baran kara adeecida aasaasiga ah. Maaha wax aan caadi ahayn in laga helo eeyahaas sare ee ay adeeca .
Noocani waa mid caqli badan oo ku nool si uu uga farxiyo milkiilahooda. Waxay caan ku yihiin barashada fiiqan iyo dagdag, waxay badanaaba ku fiicnaadaan isboortiga canine sidoo kale.
Sidii hore loo soo sheegay, Yorkie-Poo waxay jeceshahay fiiro gaar ah mana ka careysiiso sida ay ku helaan.
Si looga hortago qayladooda la yaqaan, xooji kaliya dhaqanka aad rabto inaad aragto iyo iska dhaaf wax kasta oo kale .
Eygaaga rabitaankiisa dabiiciga ah ee noqoshada tooska ayaa ku dhiirrigalin doonta inay ku soo celiyaan habdhaqanka hela abaalmarinta dareenka.
Nasiib darrose, noocani ma aha eeyga ey caafimaad qaba ee la haysto.
Patellar Luxation aad ayey ugu badan tahay Yorkshire Terriers. Tani waa meesha jilibka si ku meelgaar ah u kala baxa oo keenaya awoodin socoshada.
Xaalad kale oo inta badan saameyn ku yeelata isku-laabashada lugaha waa Cudurka Legg-Calve-Perthes. Xaaladdani waxay ku lug leedahay isbeddellada laf-dhabarka ee femur waxaana badanaa lagu saxaa qalliin.
Suuxdintu waa sidoo kale caan ku ah nooca taranka Yorkipoo .
Calaamadaha badanaa waxay bilaabaan inay soo bandhigaan inta udhaxeysa hal ilaa shan sano jir, waxaana lagu daaweyn karaa daawo.
Xaaladda ugu dambeysa ee la ogyahay waa hypoadrenocorticism, ama sida loogu yaqaan aadanaha; Cudurka Addison. Xaaladdan waxaa lagu maareyn karaa iyada oo loo marayo daawo ku jirta qiyaasta saxda ah ee hormoonnada.
In kasta oo ay suurtagal tahay arrimaha caafimaadka, Yorkipoo wuxuu inta badan ku nool yahay nolol dheer, farxad iyo caafimaad leh oo u dhexeysa 10 illaa 15 sano.
Maaddaama ay yihiin biilal caafimaad oo qaali ah, milkiilayaasha qaarkood waxay doorbidaan inay galaan caymis, oo ku kacaya qiyaastii $ 35 illaa USD 40 USD / bishii nuucaan.
Yar, jilicsan oo qalafsan , Yorkipoo waa xirmo dammaanad leh oo madadaalo leh.
Fantastic milkiilayaasha-markii ugu horeysay, eey this dhogorta leh waa nooc daacad ah oo bulshada. Caqligooda dabiiciga ah ayaa ka dhigaya kuwo si fudud loo tabobaro iyo jacaylka ay u hayaan fiiro gaar ah ayaa ka dhiga iyaga wehel weyn.
Si dabiici ah ula qabsi, waxay ku kobcaan labada aqal ee magaalada iyo guryaha hareeraha ah. Xitaa si wanaagsan ayey ula shaqeeyaan carruurta, haddii ay si fiican u ciyaaraan.
Khasaaraha kaliya ee ka jira isku dhafka 'Yorkie Poodle Mix' waa qiimaha eey yar yar iyo arimahooda caafimaad mustaqbalka dambe ee nolosha.
Tani waa wax ay tahay in la tixgeliyo ka hor intaadan iibsan eeyaha yaryar ee Yorkipoo, waa maxay fikradahaagu? Noogu reeb faallooyinka hoose.
Miyuu Adhijirka Jarmalka ah ee Malamute isku dhafan yahay iskutallaab wanaagsan?
Maxaad ka ogaan laheyd eeyga Canis Panther
adhijir Australiyaanka brown xuduud collie mix
Madow pitbull shaybaarka isku dhafka ah
Jarmal Shepherd shaybaadhka dib u soo celinta dahabiga ah
gooldhaliyaha dahabiga ah ee isbaanishka isku darka eeyaha